Audiense Insights: Vateereri Segmentation Intelligence uye Analysis Software | Martech Zone
Yakakosha zano uye dambudziko paunenge uchigadzira uye kushambadzira mhando ndiko kunzwisisa kuti musika wako ndiani. Vashambadziri vakuru vanodzivirira muedzo wekufungidzira nekuti isu tinowanzo kurerekera munzira yedu. Anecdotal nyaya kubva kune vemukati vanoita sarudzo vane hukama nemusika wavo kazhinji havaburitse maonero evateereri vedu nekuda kwezvikonzero zvishoma:
Iwo akanyanya kurira tarisiro kana vatengi havasirivo vepakati kana tarisiro yakanaka kana vatengi.
Nepo kambani inogona kunge iine yakakosha mutengi-base, hazvireve kuti ine chaiyo mutengi-base.
Zvimwe zvikamu zvinofuratirwa nekuti zvidiki, asi hazvifanirwe kunge zvirizvo nekuti zvinogona kuve nekudzoka kwakanyanya pakudyara kwekushambadzira.
Data yemagariro mugodhi wegoridhe wekufumura vateereri uye zvikamu nekuda kwehupfumi, huwandu hwakawanda hwe data iripo. Kudzidza kwemichina uye kugona kugadzirisa iyo data kuri kuita kuti mapuratifomu akwanise kuona zvine hungwaru zvikamu zvevateereri uye kuongorora maitiro, zvichipa maonero anogoneka ayo vatengesi vanogona kushandisa kuti vatarise zvirinani, kugadzirisa, uye kuwana mhedzisiro yepamusoro.
Chii chinonzi Audience Intelligence?
Uchenjeri Vateereri ndiko kugona kwekunzwisisa vateereri zvichibva pakuongorora kwemunhu uye kuunganidza data nezvevatengi. Uchenjeri Vateereri mapuratifomu anopa ruzivo pazvikamu kana nharaunda dzinoumba vateereri, vateereri psychographics uye huwandu hwevanhu vachikwanisa kubatanidza zvikamu zvevateereri kune zvekuteerera munharaunda uye analytics mapuratifomu, maturusi ekushambadzira ekushambadzira, mapuratifomu ekushambadzira kwedhijitari uye kumwe kushambadzira kana masutu ekutsvagisa vatengi.
Audiense Insights Vateereri Intelligence
Audiense inobatsira mabhureki kuona vateereri vakakodzera vane ruzivo rwunoita runobatsira kuzivisa nzira dzekusimudzira bhizinesi rako. NeAudiense Insights, unogona:
Ziva chero vateereri kana chikamu - Vateereri inokubvumira kuti uone uye unzwisise chero vateereri, zvisinei kuti yakananga sei kana kuti yakasarudzika kuita ongororo yevateereri. Nesimba sanganisa akawanda mafirita sarudzo kana iwe ukagadzira rondedzero, senge mushandisi profiles, affinities, demographics uye mabasa ebasa, kugadzira yakasarudzika yevateereri zvikamu. Armed with Audiense Insights iwe unogona kufumura hungwaru hwevateereri kuita zvirinani zvekushambadzira sarudzo, gadzirisa yako yakanangana, kuvandudza relevancy uye kutyaira yakanyanya kuita mishandirapamwe pachiyero.
Pakarepo nzwisisa kuti ndiani anoumba vateereri vako - Audiense Insights zvinoshanda machine learning kuti unzwisise ipapo kuti ndiani anoumba vateereri vako, nekuongorora hukama pakati pevanhu vanoiumba. Enda kupfuura kupatsanurwa kwechinyakare zvichienderana nezera, murume kana mukadzi nenzvimbo, ikozvino unogona kuwana zvikamu zvitsva zvinoenderana nezvido zvevanhu uye nzwisisa musika wako wazvino unotarwa padanho rakadzama. Vateereri vavo hungwaru chikuva chinokutendera kuti uenzanise zvikamu nehwaro kana vamwe vateereri uye kugadzira mabhenji ane zvikamu zvakasiyana, nyika kana kunyange vamwe vakwikwidzi.
Iva nedata rako – batanidza Audiense Insights nedata rako pachako kana maonero. Ingo tumira ma report ako kune PDF or PowerPoint mafomati ekushandisa zvinonyanya kukosha nezvevateereri vako mumadhizaini ako emharidzo. Kana neimwe nzira, tumira kunze imwe neimwe yeruzivo kune a CSV faira kuitira kuti ugone kugadzirisa, kugovera kana kusanganisa ivo musangano rako.
Maitiro ekugadzira Yako Yemahara Audience Intelligence Report
Heino vhidhiyo yekupfupisa pamusoro pemashandisirwo VateereriChirongwa chemahara chekugadzira mushumo weInsights uchishandisa iyo yekutanga yekugadzira vateereri wizard. Usarega shoko zvinhu kupusa iwe, zvakadaro. Chirevo chinopa demographic, geographic, mutauro, bio, zera, socioeconomics, brand affinities, pesvedzero yemhando, zvido, media affinity, zvirimo, hunhu, kutenga pfungwa, maitiro epamhepo, uye epamusoro 3 zvikamu!
Vaka Yako Yemahara Audiense Insights Analysis
Kuzivisa: Ini ndiri mubatanidzwa we Vateereri uye ndiri kushandisa yangu link mune ino chinyorwa.
Tags: kuongorora kwevateererivateereri njeremanzwisisiro evateereriongororo yevateereribrand researchcompetitor njerekuongororwa kwevatengimutengi profileongororo yevateverichikamu chevateveriinfluencer analysiszvikamusocial media vateereri kuongororapasocial media profile